तिम्रो लोग्ने र म – मझेरी डट कम
‘म तपाईंसँग फोटो खिच्छु नि ।’
ठान्यो ? ननिको लागेको थियो मलाई । उसलाई देखाएरसमेत माया गर्न सक्दिनथेँ म । उसलाई सञ्चो भैसकेको थिएन । तिमी पनि घर फर्किसकेकी थिइनांँै । ऊ डाक्टरकोमा आउँदा मलाई भेट्यो । ऊ आउनुपर्ने डाक्टरको क्लिनिक र मेरो अफिससँगसँगै थियो । उसलाई भेट्न पाएकीमा म असाध्यै खुसी थिएँ । अलि दुब्लाएको रहेछ ऊ । मैले उसका लागि फलफूल र अरू खाने कुरा किनेकी थिएँ । त्यो किनिरहँदा मलाई अनौठो खालको आनन्द लागेको थियो । यही आनन्द, यही खुसी अन्तिम रहेछ तिम्रो लोग्नेसँगको । तिमीसँग अकाट्य सम्बन्ध रहेछ उसको । त्यो तिमी स्वयं पनि जान्दिनौ होली …,मैले किनेकी केही सामान पनि लगेन उसले । मलाई दोस्रो पल्ट असाध्यै नराम्रो लाग्यो । अर्काको लोग्नेलाई माया गर्नु निरर्थक लाग्यो । कस्तो प्यारसँग किनेकी थिएँ । फगत तिम्रो कारणले …। तिमीले शङ्का गछ्र्यौं भन्ने भयले…। तिम्रो मन दुख्ला भन्ने कत्रो होसियारी जतन ? मेरो दिलको हालत तिम्रो लाग्नेलाई के मतलब ?